Izindatshana zikaSean Zinsmeister ku Martech Zone |
Imibhalo nge USean Zinsmeister
USean wenza ubuciko bokubeka, ukuthumela imiyalezo kanye namasu wokuya emakethe jikelele we-Infer's trove yamamodeli wokuhlaziya wokubikezela esizukulwaneni esilandelayo. Uma usenelisekile Faka ikhasimende uqobo, uSean ujoyine i-Infer evela kwaNitro, inkampani yesoftware ephethe imibhalo eSan Francisco, lapho asungula khona futhi wahola ithimba lezentengiso lomhlaba wonke eliwinile imiklomelo. USean uneziqu ezisezingeni eliphakeme ezivela eSuffolk Sawyer School of Business naseNyakatho-mpumalanga ngokulandelana kwezokukhangisa ngamasu nokuphathwa kwamaphrojekthi.
Infer Net New Leads: Khomba bese Uthumela Ukuhola Okuhamba phambili ku-Salesforce
NgoLwesibili, Septhemba 15, 2015 USean Zinsmeister
Amabhizinisi alwela ukutolika izintaba zedatha ngamakhasimende abo nokuthi yini ebakhuthazayo. Cishe akunakwenzeka ukubona ihlathi ezihlahleni lapho abantu begxile ohlelweni lwabo lokuqopha ngokukhipha imininingwane ewusizo kuzo zonke izibonakaliso ezinhlelweni ezingafani njengeSalesforce, iMarketo neGoogle Analytics, kanye nemithombo engahlelekile evela kuwebhu. Zimbalwa izinkampani ezinezinsizakusebenza noma ubuchwepheshe bokumba idatha yazo futhi zisebenzise izibalo ezinqumayo